Ogaden News Agency (ONA) – Waxay la mid yihiin un hoolanayaal shanlo ku dagaalamaya
Waxay la mid yihiin un hoolanayaal shanlo ku dagaalamaya
Nin oday ah oon wax ka weydiinay arimaha ka dhex socda maamulka gumaysiga ee Jigjiga ayaa wuxuu ku bilaabay hadalkiisa, dadka waxaa ugu caqli xunbaa la yidhaahdaa laba qof oo ku dagaalanta wax aan gacantoodaba ku jirin. Arin u dhiganta ayaa ka taagan Jigjiga hadda oo la’isku wada haystaa. Wayna muuqataa inuu taliska TPLF raali ka yahay sida ay arinta u socoto. Hordhacaa ka dib ayuu sii sharxay oo yidhi waxaa ka taagan Jogjiga qaar leh waxaan u dabaadagaynaa degmo nala siiyay iyo qaar leh waxaan u dacwoonaynaa Adisababa oo waxaa naloo diiday xaqanagii. Labadaa koox oo qaarna ay dabaadagayaan qaarna ay aad u cadhysan yihiin waxaa daawanaya oo qosol meel la fadhiya maamulka Tigreega meesha ka jooga iyo inyaroo caqli leh oo waxanoo idil fahamsan ujeedada ka dambaysa.
Waxay arintan dib ii soo xasuusiyeen sheeka caruureedii ahayd ninkii afadiisa ku dilay gubadka aan gubi doono, biciidka daaqi doona, suumanka aan ka jeexi doono, sumalka aan ka gadi doono subagiisa cab iyo mayee adigaa cab. Nin siyaasi ah oo arimaha Somalida aad ula socon jiray intuusan isaga hadhin ayaa wuxuu yidhi; waxaa ii waramay nin Tigree ah oo igu yidhi somalida markaan rabno inay madax isla galaan waxaan soo dhex dhignaa un dhowr jago oo magac u yaal ah. ka dibna banaanka ayaan ka daawanaa budhka ay isla dhacayaan.
Waxyaaba badanoo waxaa jira aan ka soo maaxanin maskaxda maamulka magac u yaalka ah ee ka dhisan Jigjiga oo la faro inay magacooda ku sameeyaan, waxaana ka mid ah arimaha hadda ka dhex aloosan gumaysi agoolka markii la yidhi 15 degmo ayaa la magacaabay .. Iska daa magaalada Jigjiga iyo gudaha Ogadenyee wuxuu ka noqday dalalka dariska ah sida Jabuuti iyo Kenya mawduuc lagu qayilo oo la yidhaahdo go’aano ayaan ka soo saarnay arintan sidii iyagoo awood u leh ay wax uga badalaan qorshaha Wayaanaha eek u dhisan iska horkeenka shacabka Somaliyeed.
Qaybi oo xukun waa nidaamka kaliya ee gumaysiga uu umad iyo dal ku xukumo. Haddii ay hal degmo wada daganaayeen dad shacabk ah waa 3ex u qaybi, haday lahaayeen laba nin oo madax ah u sheeg in looga dhigay 3ex oo dheh soo magacaaba midka 3xaad. Kolba koox soo dhawee kuwana fogee. Arimahaa oo aan dhamaad lahayn ayaa ka mid ah dhaqanka gumaystaha inta uu gumaysiga jiro.
Hadaad fiirfiiriso dhamaan shabakadaha gumaysiga u adeega waxaad ku arki reer hebel oo mahadnaq iyo dabaadag ku jira iyo reer hebel oo dacwada qoranaya oo leh waxaan u sii soconaa Adisababa.
Waxaa aad iiga yaabisay kuwa ku shiray Kenya ee cabashada ka muujiyey degmooyinka la sameeyay ey leh waa nalaga qadiyay sababna uga dhigay oo yidhi; (.. taas oo looga gol leeyahay beesha nabada ah in col lagu shido waxaana si cad looga soo horjeestay in beesha marnaba eeysan nabada ey Dowlada la qaadatay lagu ciqaabo oo eey arintaas ilaa dowlada dhexe ee Ethiopia lala tiigsan doono.). Waa markii ugu horeysay taariikhda gumaysiga inta la xusuusto la sheegay in lagu ciqaabay gobol nabaddii uu la qaatay gumaysiga? Oo yaa ku ciqaabay? Isla gumaysigii. Sow xaq uma laha Tigree-ga markanoo kale inay qosol meel la fadhiistaan.
Waxaa iyadana wax lagu cibrad qaata ah shirka la yidhi wuxuu ka dhacay Jigjiga oo waxaa ka soo qaybgalay 100 madax dhaqameed iyo aqoonyahan ah oo kasoo jeeda beesha (XX) ee degta degmada Awbarre ee gobolka Jigjiga iyo dagmooyinka kale ee ka agdhaw. Maxay ka hadlayeen tolow? Dhibaatada maanta haysata umadda Somaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka Somaliyeed ee dagan Ogadenya malagaga hadlay shirka la yidhi laba maalmood ayuu socday oo dadkaa boqolka kor u dhaafaya ayaa isugu yimid. Waxaa lagu falanqeeyay sida ay qoreen shabakadaha ka agdhow gumaysiga; ( .. sida deegaanka ay beeshu dagto looga eexday, isla markaana aanan loogu magacaabin wax dagmo ah.).
Waxaan iyadana ka dhagaysanay idaacadda BBC-da nin u hadlay reer Dirdhaba oo sheegtay arima badan, hasa ahaatee aan marnaba ku soo darin hadaladiisa dhibaatada uu ku hayo Cabdi ilay iyo maxaysata uu qortay dadka shacabka ah een waxba galabsan. Balse wuxuu sheegay inuu cabdi ilay ugu faanay oo ku yidhi kursiga aad ku fadhido hoostiisa waxaan ku aasay walaalkay oon dilay? Waxaa aad uga yaabisay dadkii dhagaysanayay ninkaa odayga ah inuusan muujinin inuu ka xunyahay dilka uu ugu faanay Cabdi ilay balse uu ku eedeeyay maydka la yidhi hoostiisa ayuu ku aasanyahay waa nabadiid.
Waxaan waxba dhaamin kuwa dabaadagaya ee fariimaha mahadnaqa ah u soo diraya cabdi ilay eel eh degmaa nala siiyay sida iyagoo degmadooda ka taagay calan xor ah oy u madax banaan yihiin.
Isku soo duub, arimahnoo idil waxay muujinayaan jahawareerka haysta gumaysiga iyo kuwa u adeegaya iyo kuwa aan fahmin weli ama aan doonaynin inay fahmaan gumaysiga iyo tabihiisa.
xaarwayane waxaaa uukudibireay waa dhiigii shacabkayga walee jwxo ayaa kaasoomantajin doonta hawada hawadee wadanka wiil lahaaba walee lawareegi wayane wakhtigiisii wadhamaday